“Mbola tiako lavitra noho ny Louis Vuitton ny kitapo vita Malagasy” Momo Jaomanonga – Blaogin'i Voniary
Poeta manan-talenta, kiady sy reharehan’ny KOLONTSAINA MALAGASY AVY ANY AVARATRA raha i Momo Jaomanonga. Sarotiny fatratra amin’ny fanajana ny SOATOAVINA MALAGASY izy ary tsy ventesiny amin’ny tononkalony fotsiny izany fa iainany isan’andro ihany koa. Na teo aza ireo sedra maro nolalovany dia nanonga hatrany izy ary tsy nitsahatra nanoratra. Ny fandrosoana, ny fiainana andavanandro ary ny fijery miabo no tara-keviny ary feno ANATRA, HAFATRA MAHASOA SY FAHENDRENA ireo asa sorany na dia vao 25 taona monja ny tovolahy. Nivoaka ny 08 Mey 2018 teo ny amboaran-tonokalo nomeny ny lohateny hoe “TARATASIN’I ZAMAN’I JAO”. Ndeha ary hofantarintsika ao anatin’izao antsafa izao i Momo Jaomanonga.
Voniary: Inona no nahatonga ilay anarana hoe “Momo Jaomanonga”?
Momo Jaomanonga: Momo aloha avy amin’ny teny frantsay hoe “mot” naverina indroa. Jaomanonga, misy heviny lehibe avy amin’ny tantaram-piainako. Mbola ankizy ny tena dia efa voatery tsy maintsy niaina toa olon-dehibe noho ny trangam-piainana maro nosedraina. Nanamarika ahy manokana ny fahakambotian-dreny ka namolavola ahy mba hiezaka sy hikofoka ary tsy hitarai-maharary amin’izay rehetra atrehina amin’ny fiainana. Izay no nanome tanjaka nahatonga ny tena mba ho « JAO », izany hoe MPIADY, ary tsy mba kivy amin’ireo sedra mahazo fa miezaka MANAKATRA NY AMBONY FOANA, MANONGA, mba hanatanteraka ny kasa sy ny nofinofy ho an’ny fiainana any aoriana.
V: Mba tantarao anay hoe ny fiainana maha-mpanoratra anao
MJ: Mpanoratra ve? Mbola mpianatra manoratra angamba ! Efa tia vaky boky aho fony mbola kely, ary nanomboka nanoratsoratra tany tamin’ny fahafolo taona tany. Tia mandray anjara amin’ny fifaninana asa soratra ihany koa ny tena sady mpitondra teny foana rehefa lanonana tany am-pianarana. Efa mpanentana fandaharana resaka zava-kanto tao amin’ny haino aman-jery tao Ambanja aho, ny taona 2005 mankaty.
Taratasin’i Zaman’i Jao: Boky voalohany nosoratan’i Momo Jaomanonga
Fizarana ny ao an-tsaina sy ny avy ao am-pò; fitsikerana ny zava-misy iainana andavanandro; fanolorana vahaolana sy fomba fijery tsy miala amin’ny maha Malagasy, arahin’ireo teny famporisihina sy feno fanantenana ho an’ ny namana mpiara-belona no vetsovetsoin’i Momo JAOMANONGA an-tsoratra arak’izay mba takatry ny saina.
V: Manoratra amin’ny teny avaratra ianao, inona ny tombontsoa? Inona ny olana?
MJ: Fifankatiavana sy firaisankina anaty fisamihafana no atao hoe fihavanana, ary io no tena maha Malagasy. HARENA IZAY TSY FITOVIANA izay raha entina amin’ny làlana tsara. Mba ho fiarovana izay harena ara-kolotsaina izay no nanosika ahy HANANDRATRA NY TENIM-PARITRA fa indrindra ny avy avaratra. Tombontsoa lehibe iray koa: kelikely kokoa ny hantsana mampisaraka ny mpandefa hafatra sy ny andefasana raha ny teny iainany andavanandro no ampitàna izany.
Eo amin’ny lafin’ny fandrafetana an-tsoratra no olana indraindray ary ady goavana, ka mahatonga ny tena lasa mamorona mihitsy amin’ny fomba fanoratana rehefa hita fa mifanalavitra loatra amin’ny teny malagasy ofisialy ny sasany. Ary misy koa aza teny frantsay voatery tsy maintsy ampidirina raha tiana ho tafita tokoa ny hafatra. Tsy voatery ho tsara anefa izany fa ilaina amin’ny lafin’ny iray, porofo ilazana fa mivelatra isika ary tsaròvy ihany koa fa avy amin’ny fitambaran’ny fiaviana maromaro isika Malagasy.
V: Anisan’ny sarotiny sy mandala fatratra ny maha-Malagasy anao, ahoana no iainanao izany?
MJ: MIREHAREHA AHO FA MALAGASY, MITENY MALAGASY ARY MANORATRA AMIN’NY TENY MALAGASY. Mihinana sakafo amin’ny fanaon’ny malagasy foana aho na dia tsy voatery eto an-tanindrazana aza. Ny fitafy gasy moa tsy miala e, mbola tiako lavitra noho ny Louis Vuitton ny kitapo vita malagasy.
Mbola miady ho an’ny tena fahaleovan-tena isika Malagasy hatramin’izao. Araka ny hevitro, NY TSY FIANKINAN-DOHA AMIN’NY ANY IVELANY MANOMBOKA AMIN’NY ZAVATRA HITA MASO AMPIASAINTSIKA ANDAVANANDRO MIPAKA HATRANY AMIN’NY TSY HITA MASO MBAMIN’NY FOMBA FISAINANA NO AZO ANAPOROFOANA FA MALAGASY MAHALEO TENA TOKOA ISIKA...
V: Inona no teny manentana na foto-kevitra ijoroanao amin’ny fiainana?
MJ: « ARAKARAKA NY LAZON’ADY, FAÑAHY NDREKY FÔ, MAÑÒDY FATATRA » (arakaraky sedra iainana no mahatonga ny fanahy ho matotra Ary ny fò ho tony).
« ANAO TSY MIDEKY, ‘ZAHO MANONGA » (fanazavana: mideky = midika, manonga= miakatra)
V: Hafatra ho an’ny mpamaky ny blaogy?
MJ: Toerana iray anovozam-pahalalana sy ifampizarana ny aterineto, isan’izany ny blaogy toy itony fa Indrindra noho ity iray ity izay mifototra amin’ny fiarovana sy fanandratrana ny tenindrazantsika Malagasy. Mamporisika amin’ny fitsidihana azy matetika izahay. Tsara ho tsaroana fa NY FANAJANA NY KOLONTSAINA SY NY SOATOAVINA DIA ISAN’NY AMPINGA LEHIBE MITONDRA ANY AMIN’NY FANDROSOANA TENA IZY…
Mankahery ny mpandrindra ny blaogy sy ny mpanaraka ihany koa.
Sambìa ho meva atsika jiaby!
Kolontsaina Malagasy, Momo Jaomanonga, Taratasin'i Zaman'i Jao, Tenim-paritra, Teny avaratra, Tignony Fabio, Zaman'i Jao
Un commentaire sur ““Mbola tiako lavitra noho ny Louis Vuitton ny kitapo vita Malagasy” Momo Jaomanonga”